अब पनि सम्हलिएन भने हामी आफ्नो बाटो खोज्छौ (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » अब पनि सम्हलिएन भने हामी आफ्नो बाटो खोज्छौ (अन्तरवार्ता)
अब पनि सम्हलिएन भने हामी आफ्नो बाटो खोज्छौ (अन्तरवार्ता)
संयोजक, राजपा नेपाल
मधेशी दलमध्ये कोही सुरक्षित हुनुहुन्छ भने त्यो हा महन्थ ठाकुर । सर्लाही छाडेर चुनाव लड्न जन्मभूमि महोत्तरी फर्किनु भएका राट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक समेत रहनु भएका ठाकुर नेपाली राजनीतिको परिचित नाम हो । महोत्तरी २ बाट उहाँको जीत सुनिश्चित रहेको चर्चा सर्वत्र सुनिन्छ । स्थानीय चुनावमा राजपा नेपालले प्राप्त गरेको मतलाई पनि आधार मान्दा पनि उहाँ सबभन्दा अगाडि देखिएको छ । शान्त, शालिन र भद्र–भलादमी नेताको रुपमा चिनिनु भएका उनी पछिल्लो नेपालको राजनितिमा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको कारण चर्चामा हुनुहुन्छ । सर्लाहीमा दुईटै सविधानसभा चुनाव हारेका महन्थ ठाकुर बडो सचेतताका साथ जित्ने गरि महोत्तरी आउनु भएको हो । चुनाव प्रचारको क्रममा महोत्तरीमा व्यस्त रहनु भएका ठाकुरसँग सहाराटाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीको मुख्य अंशः
कस्तो भइरहेको छ चुनाव प्रचार ?
–तपाईले हेर्नु नै भयो । मतदाताको घरघरमा जाने आफ्नो एजेण्डाको बारेमा जानकारी गराउने र मत माग्ने काम भइरहेको छ । मतदाताको घरमा जाँदा उनीहरुले राख्ने जिज्ञासाको जवाफ पनि दिन्छु । प्रचार प्रसारका लागि कही कोणासभा, कही आमसभा त कही घरदैलो गर्दै जनतामा पुगिरहेको छु ।
मतदाताको घरमा जाँदा तपाईसँग राख्ने मुख्य मागहरु के के हुन्छन् ?
–मतदाताहरु आफ्नो मुद्दा र एजेण्डामा निकै सचेत भएको पाए । उनीहरु आफ्नो मुद्दा र एजेण्डालाई राम्रोसँग बुझेका छन् । र, बडो गम्भीरसँग आफ्नो कुरा उठाउँछन् । राज्यले मधेशी जनतासँग गरेको सबै विभेदसँग उनीहरु परिचित देखिन्छ । विभेदका कुरा सबै उनीहरुलाई कण्ठस्तै छ र ती कुराहरु हामीसँग जिज्ञासा राखेका हुन्छन् । सविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुखकताका साथ उठाएका हुन्छन् भने नागरिकता, समावेशी समानुपातिकका विषय पनि उनीहरु प्राथमिकताका साथ उठाएका हुन्छन् ।
सबै मतदाताको घरमा पुग्नुभयो त ?
–पहिलाको तुलनामा यसपटक घरदैलो गर्न मुस्किल छ । सबैको घरमा जान सम्भव छैन । पहिला सानो सानो क्षेत्र हुँदा सबैको घरघर जान भ्याइन्थ्यो तर यसपटक गाह्रो छ । यसपटक सेन्टर बनाएका छौं । विशेष विशेष ठाउँमा गएर जनतालाई सम्बोधन गर्ने, कोणसभा गर्ने जस्ता कार्य गरेर जनतासँग मत माग्ने गरेका छौं ।
अरु जिल्लाको तुलनामा महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम तथा दक्षिण भेग अलि पिछडिएको छ अब तपाई जितेपछि त्यसमा सुधार गर्ने के के योजना बनाउनु भएको छ ?
–ठिक भन्नुभयो, अरु जिल्लाको तुलनामा महोत्तरीको सदरमुकाम निकै पछाडी परेको छ । विकासका लागि जलेश्वरलाई सम्झेको पनि छैन जस्तो लाग्छ । जलेश्वर रोगी जस्तो देखिएको छ । हुन त मधेशका आठवटै जिल्लाको अवस्था बेहाल छ तर जलेश्वरको अवस्था अलि बढी नै विग्रेको छ । हाम्रो क्षेत्रमा एउटा ठूलो विघि नदी छ । त्यसमा आएको बाढीको अवषेश अझै बाँकी छ । साउनमा आएको बाढीका कारण प्रभावित भएका जनता अझै राज्यबाट राहत पाएको छैन । मणिपाल अस्पताल बनाउनका लागि ३२ विघा जमिन खरिद गरिएको छ तर अझैसम्म त्यो तयार भएको छैन । जनकपुर–अयोध्या करिडोर, रेल्वे लगायतका विषयमा पनि जनताले जिज्ञासा राख्ने गरेको छ । अरु जिल्लाको तुलनामा यहाँ बाल मृत्युदर निकै बढी छ ।
यो जिल्लाको अवस्था यस्तो हुनुमा कसलाई दोषी देख्नु हुन्छ ?
–राज्य नै दोषी हो । पहाडी जिल्लाको सदरमुकाम हेर्नुस् र मधेशका जिल्लाको सदरमुकाम हेर्नुस् आकाश जमिनको फरक पाउनु हुन्छ । के पहाडका सदरमुकाम नेपालमा पर्छ र मधेशका सदरमुकाम अरु देशमा पर्छ त ? होइन नि अनि किन यस्तो विभेद । मधेशका सडक बनाउन वर्षौ लाग्छ तर पहाडका सडक रातारात तयार हुन्छ यसको दोषी को त । तपाई जनकपुरबाट जलेश्वर आउनु भएको होला यो सडक बन्दै गरेको वर्षौं भयो तर अझै तयार भएको छैन तर तपाई इमाल, झापा, जाजरकोटतिरको बाटो गएर हेर्नुस् दिनमा सडक हेर्नु हुन्न तर विहान उठ्दा पक्की सडक बनेको हुन्छ के चमत्कार हुन्छ त्यहाँ जो यहाँ हुँदैन । बजेटमा हेर्नु हुन्छ सदरमुकाम निर्माणका लागि अर्बौ बजेट छुट्याएको हुन्छ तर काम हुँदैन किन हुँदैन कसले किन रोकेका हुन्छन् ? यो शासकहरुले नियोजित रुपमा मधेशसँग विभेदपूर्ण व्यवहारको नतिजा हो ।
बालमृत्यु दर बढ्नुको कारण के हो ?
यसको कारण धेरै हुनसक्छ । त्यसमध्ये मुख्य कारण उच्च जनसँख्या नै हो । गाउँदेखि सहरसँग जनसँख्या उच्च रहेको छ । त्यसको अवश्यकता पूरा भइरहेको छैन । खानपान व्यवस्थित बसाई स्वास्थ्य, शिक्षाको अभाव देखे मैले । जनताले स्वास्थ्यमा त्यति ध्यान दिएको पाइएको छैन । अस्पतालको पहुँच नहुनु, पहुँच भएको ठाउँमा पनि प्रसुतीका लागि महिलाहरु अस्पताल नजानु त्यसका मुख्य कारण देखिएको छ । परम्परा ढंगबाट अझै पनि बच्चा जन्माइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिवेदन अनुसार एक महिनामा ३० बच्चाको मृत्यु हुने गरेको देखाइएको छ ।
महोत्तरीलगायत मधेशमा विकास नहुनुमा मधेशी नेता दोषी छैनन् ?
–कसरी दोषी हुन्छ तपाई नै भन्नुस् न । मधेशी दलका नेताहरु मधेशको अधिकारका लागि सधै लडि रहे । मधेशी जनताले अधिकार पाएन, मधेशमा विकास भएन भन्दै विगत १० वर्षदेखि निरन्तर सडकमा छन् । राज्यसँग लड्दै आइरहेका छन् तर राज्यले हालसम्म कुनै सुनुवाई गरेको छैन । यो गर्दिन्छु, त्यो गर्दिन्छु भन्नुहुन्छ तर हालसम्म केही गरेको छैन । जहिले पनि भ्रममा राखेर मधेशलाई बर्वाद गर्ने काम गरेको छ ।
तपाईहरु विकास भन्दा बढी अधिकारका कुराहरुलाई चुनावमा बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ किन विकास चाहिदैन मधेशलाई ?
–मधेशी मतदाता आफै भन्छन्, हामीले अधिकार पायौं भने विकास आफै गर्छौ । विकासको कुरा मधेशको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसलै हामी अहिलेलाई विकासभन्दा अधिकारलाई विशेष जोड दिएका छौ । हाम्रो अहिले पनि मुख्य एजेण्डा नै सविधान संशोधन हो । सविधान संशोधन नभएसम्म मधेशले मुक्ति पाउन सक्दैन र कुनै विकास पनि हुनसक्दैन । राज्यले मधेशमाथि गरेको विभेदको कारणले नै महोत्तरीको अवस्था यस्तो भएको हो । मधेशी जनताले नै भनिरहेका छन् राज्यबाट पहिला अधिकार लिऔं अनि विकास आफै गरौला । त्यही भएर हामीले सविधान संशोधनलगायत मधेशका अन्य अधिकारलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा चुनावमा अघि बढाएका छौ । सविधान संशोधन नभएका कारणले हाम्रो धेरै नोक्सान भएको छ । जुनकुरा सविधान उल्लेख भइसकेको थियो त्यो पनि अहिले हटाएको छ । सविधान संशोधनका लागि मधेशी जनताले यस्तो योगदान दिएको छ । अब यस अवस्थामा त्यसलाई त्यतिकै छोड्न मिल्दैन । यो नयाँ सविधान निकै कठोर छ । सजिलो तरिकाले संशोधन हुने अवस्था छैन ।
मधेशवादी दलको जुन उपस्थिति हुन गइरहेको छ त्यसले मात्र सविधान संशोधन हुँदैन नि ?
–हो त्यो सही हो । हाम्रो मतले मात्र सविधान संशोधन हुँदैन तर हामी विना उनीहरु पनि कुनै काम गर्न सक्दैन । सविधान संशोधन उनीहरुका लागि पनि बाध्यता बन्न सक्छ । चुननावमा सविधान संशोधनको कुरा हामी भन्दा बढ्ता चर्को स्वरमा उनीहरुले उठाएका छन् । ठूला दलका उम्मेदवारहरुले सविधान संशोधनको कुरा मधेशी जनतामा यसरी लगेका छन् कि जितेर गएपछि उनीहरुलाई बाध्य बनाउनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वयं आफै यो सविधान संशोधन गराउने बोल्दै हिड्नु भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि विभिन्न चुनावीसभामा सविधान संशोधनको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । सविधान संशोधनको विरोध गर्ने केपी शर्मा ओलीले पनि सविधान संशोधन गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई किन चाहियो बहुमत वा अल्पमत । उहाँहरु आफै सविधान संशोधनका लागि अगाडि बढ्नु भएको छ राम्रो कुरा हो । मधेशी जनताको माग अनुसार गराओस् सविधान संशोधन । तर, हामीलाई थाह छ उहाँहरुले सविधान संशोधन गराउनु हुन्न । हाम्रो दावी काठमाडौमाथि छ । हाम्रो दावी दुई नम्बर प्रदेशमाथि रहेको छ, जो हामी लिएर छाड्छौ । काठमाडौ हामीले बसाएका हौं र मधेश हाम्रो आफ्नै भइहाल्यो दुई ठाउँमा हाम्रो दावी छ । त्यो दिन उहाँहरु तयार हुनुपर्यो ।
संसदमा जुन उपस्थिति हुन्छ, जुनसँख्या छ त्यसले गर्दा सविधान संशोधनका लागि ती ठूला दलहरुको साथ चाहिन्छ नि ?
–हो हाम्रो सँख्याले मात्र सविधान संशोधन हुँदैन । सविधान संशोधनका लागि दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यो हामीसँग हुँदैन त्यसका लागि अरु दलको पनि साथ चाहिन्छ । पहिला पनि हामीले साथ खोजेकै हो । पटक पटक आग्रह गरिएको हो । संशोधनका लागि दवाव दिन आन्दोलन गरिएकै हो तर उनीहरुले गर्न चाहेन विभिन्न बाहाना बनाउँदै पछि हटे । तर, हामी पनि त्यतिकै मान्नेबाला छैनौ । सविधान संशोधन त कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्छ । यदि सविधान संशोधन गरेन भने हामी त्यसको विकल्प खोज्छौ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वयं आफै यो सविधान संशोधन गराउने बोल्दै हिड्नु भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि विभिन्न चुनावीसभामा सविधान संशोधनको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । सविधान संशोधनको विरोध गर्ने केपी शर्मा ओलीले पनि सविधान संशोधन गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई किन चाहियो बहुमत वा अल्पमत ।
–जुन कुरा म पहिलादेखि भन्दै आएको छु । पटक पटक मैले सचेत गराउँदै आएको छु तर उनीहरुले यसमा ध्यान दिएको छैन । यहाँ पढाई पूरा नभएपछि पढ्नका लागि मान्छे बाहिर जान्छ कि जाँदैन ? यहाँ उपचार भएन भने उपचारका लागि बाहिर जान्छ कि जाँदैन ? यहाँ रोजगार पाइएन भने रोजगारका लागि बाहिर जान्छ कि जाँदैन ? हो यदि हामीले पनि यहाँ कुनै विकल्प पाएनौ भने त्यसको अर्को विकल्प खोज्छौ । मान सम्मान र प्रतिष्ठाको आफ्नो सीमा हुन्छ । सबैको आआफ्नो मार्यादा हुन्छ । धेरै दिनसम्म अपमान सहेर बस्न सकिदैन । इज्जतको एकदिनको जिन्दगी अपमानको सय वर्षको बराबर हुन्छ । कति दिन सहेर बस्ने ? कुनै एउटा परिवारमा एक अर्कालाई अपमान गर्छ भने त्यहाँ झगडा हुन्छ र अलग हुन्छ यो त देश हो ।
देशबाट मधेश अलग गर्ने इशारा हो तपाईको त ?
–मैले भनेको त्यस्तो नौबत नआवोस् । राज्यले मधेशी जनतासँग गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्छ । मधेशी जनतासँग सम्मान व्यवहार गर्नुपर्छ । सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ । हामी चाहन्छौ यो राष्ट्र एक रहोस् ।
राजपा नेपालको घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रको कुरा उल्लेख छ, तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुराको संकेत हो कि ?
–बेलाबेलामा राज्यले हामीलाई जसरी धम्काउने र तर्साउने काम गर्छ त्यसरी हामीले पनि धम्काउने र तर्साउने काम गर्छौं । उनीहरुले मात्र तर्साउन जानेका छन् त ? हामी पनि जानेका छौ । यद्यपी बहुराष्ट्रको विषयलाई जानी जानी विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । पहिलो सविधानसभाले बहुराष्ट्र भन्ने कुरा पारित भएको विषय हो । यो कुरा सविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख थियो तर दोस्रो सविधानसभाबाट त्यसलाई हटाएको छ । यहाँ त राजनीतिक बेइमान हुने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुँदा त सबै कुरा परिवर्तन हुने ठाउँमा सविधानसभा नै परिवर्तन भएपछि उनीहरु यस्ता कुरालाई कहाँ बाँकी राख्छन् । त्यसैले यो बहुराष्ट्रको कुरा कुनै नयाँ विषय होइन । हामीले ध्यानाकर्षण गराएको मात्र हो । बहुराष्ट्र भनेको देश अलग गर्ने होइन । बहुराष्ट्र भयो भने सबै समुदाय र वर्गका जनताले अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।
चुनावपछि यही दुई नम्बर प्रदेशलाई मधेश प्रदेश बनाउनुहुन्छ कि अरु बाँकी रहेका मधेशका जिल्लालाई पनि यसमा मिलाउनु हुन्छ ?
–पहिला त प्राप्त भएका चिजलाई जोगाउनु पर्छ नत्र यो राज्यमाथि विश्वास छैन । कुनबेला के गरिदिन्छ थाह हुँदैन । यस्ता धेरै उपलब्धीहरु गुमेको छ । त्यसैले प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै बाँकीका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । यो दुई नम्बर प्रदेश (आठ जिल्ला) हाम्रो आधार हो । यसैलाई टेकेर हामीले अरु जिल्ला माग गर्छौ । अहिले जति मिलेको छ, त्यसलाई नै बनाउनेछौ । त्यो नै हाम्रो घर हो, त्यसलाई पहिला सफा र राम्रो बनाउँछौ । यसलाई सुरक्षित गर्छौ । त्यसपछि अरुका लागि सोच्छौ । पूर्वदेखि पश्चिमको तराईका भूभाग एउटै बनाउने मुद्दा हाम्रो जिवित छ । त्यसका लागि हाम्रो संघर्ष जारी नै रहन्छ तर पहिलो चरणमा हामीले जति पाएका छौ त्यसलाई राम्रो बनाउँछौ ।
तपाईहरुले भन्नुभएका बहुराष्ट्रलाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशद्रोहीको संज्ञा दिनुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
–मधेशीलाई सधै देशद्रोही भन्नुभएको छ उहाँले, यो कुनै नयाँ कुरा होइन । अधिकारको कुरा गर्दा यस्तै यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले । उहाँहरुले पटक पटक मधेशलाई अपमान गर्नुभएको छ । मधेशको अपमान गर्न अझै छाड्नु भएको छैन । यसको हिसाब किताब मधेशी जनताले राखिरहेको छ । चुनावमा यसको जवाफ उहाँले पाउनु हुन्छ ।
काँग्रेससँग लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने सहमति थियो अन्त्यमा गएर विग्रेको छ यस्तो कसरी भयो ?
–हामीले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने प्रयास गरेका थियौं तर केही कुराका कारण त्यो सम्भव हुनसकेन । अहिले हामी कुनै पनि गठबन्धनमा छैनौ । कसैसँग तालमेल पनि छैन । दुई नम्बर प्रदेशमा राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच मात्र चुनावी तालमेल भएको छ त्यसबाहेक अरु कुनैसँग छैन । बरु कुनै कुनै क्षेत्रमा दलगत हिसाबले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । जस्तै, महोत्तरीको तीन नम्बर क्षेत्रमा जहाँ मैले उम्मेदवार दिएको छु त्यहाँ काँग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर मलाई सहयोग गरेको छ । काँग्रेसबाट बजरंग नेपालीले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । उहाँले फिर्ता लिनुभएको छ । हामीले काँग्रेसलाई विभिन्न ठाउँमा सहयोग गरेका छौ । तर गठबन्धनै बनाएर त्यस्तो कही केही भएको छैन । चुनावपछि के अवस्था हुन्छ त्यसपछि मात्र त्यसको बारेमा सरसल्लाह हुन्छ । चुनावमा वामगठबन्धनसँग कुनै कतै सहकार्य भएको छैन । वामगठबन्धनले जुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ त्यसले विभिन्न आशंका उब्जाएको छ । ती आशंकाहरु निवारण गरे मात्र सहकार्य हुनसक्छ ।
वामगठबन्धनप्रति तपाईहरुको आशंका कस्तो छ ?
–वामगठबन्धन घोषणा गरेसँगै सो दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा त्यो राम्रो संकेत होइन । दुई तिहाई ल्याएर सविधान संशोधन गर्ने कुरा गरिरहेका छन् उनीहरु । अधिनायकवादको कुरा पनि कता कर्ता सुनिएको छ । कम्युनिज्मको जन्म जसरी भएको छ । जुन परस्थितिमा भएको छ । त्यसको जुन रुप थियो त्यो अब सम्भव छैन । उनीहरुले सम्राज्यवादी, अधिनायकवाद ल्याउन चाहेका छन् भने त्यो उनीहरुका लागि ठूलो भूल हुनेछ । तर वामगठबन्धनको लक्षण राम्रो छैन । जुन दलले सविधान संशोधन कहिल्यै चाहेका थिएनन् । त्यो आज सविधान संशोधनका कुरा उठाइ रहेका छन् । दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सविधानमा उनीहरु के संशोधन गर्न खोजिरहेका छन् त्यो स्पष्ट छैन । त्यसले धेरैमा शंका उब्जाएको छ ।
तपाईले जुन नेतालाई दुई महिना अगाडि पार्टीमा प्रवेश गराउनुभयो आज उहाँले तपाईकै विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुभयो यसलाई तपाई कसरी लिनुभएको छ ?
–पार्टीमा प्रवेश गराएर हामीले गल्ती गरेका छैनौ । पार्टीमा प्रवेश गरेपछि त्यसको नीति नियम र सिद्धान्त हुन्छ । त्यसलाई स्वीकार गरेर हिड्नुपर्छ । आत्तिनु हुँदैन । यसको इन्साफ जनताले नै दिइनेछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक कुरा गर्न सबैलाई छुट छ । सबैजना स्वतन्त्र छ । त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यसको फैसला जनताले गर्नेछ ।
सर्लाहीबाट महोत्तरी आउनुको कारण के हो ?
–मेरो लागि सर्लाही र महोत्तरी उस्तै उस्तै हो । मलाई दुवै ठाउँका जनता त्यतिकै मन पराउँछन् । महोत्तरी मेरो जन्मघर हो भने सर्लाही मेरो कर्मघर हो । सर्लाहीका जनताले मलाई मन पराउनु भएको थियो । मलाई मत दिएकै हो । हारजित आफ्नो ठाउँको कुरा हो तर त्यहाँका जनताले मप्रति देखाएको माया र स्नेहमा कुनै कमी थिएन । अहिले महोत्तरीको जनताले त्यस्तै स्नेह देखाएर मलाई बोलाउनु भयो र यहाँबाट चुनाव लडे । यहाँको जनताको साथ पाउनुछु भने मलाई विश्वास छ ।
अन्त्यमा आफ्नो मतदातालाई केही भन्नुहुन्छ ?
–मधेशको संघर्ष समाप्त भएको छैन । चुनाव पनि एक संघर्ष नै हो । यो पनि एउटा आन्दोलन नै हो । सडकमा जसरी तपाईहरुले साथ दिनुभएको थियो त्यसरी नै चुनावी मैदानमा साथ दिनुस् । तपाईको एउटा मतले मात्र मधेश मुक्ति सम्भव छ । मधेश सरकार निर्माण भयो भने मात्र मधेशका माग पुरा हुनेछ । मधेशीमाथि लागेका सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुन्छ । जेलमा रहेका आन्दोलनकारीहरु सबै रिहाय हुन्छ । सविधान संशोधन गराएर अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ । मधेश सरकार बनाएर मधेशको सबभन्दा विकसित राज्य बनाइनेछ ।
सहारा टाइम्स पत्रिको मंसिर १६ गतेको अंकमा छापिएको